अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा सीमा नाका नियन्त्रणमा » RealPati.com
एजेन्सी । अफगानिस्तानमा तालिबान लडाकुले इरानसँगको महत्त्वपूर्ण सीमा नाका आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् ।
इस्लाम काला नाकामा सबै गतिविधि रोकिएको बीबीसीले जनाएको छ । अमेरिकी सेना फिर्ती प्रक्रियासँगै अफगानिस्तानमा तालिबानले भू–भाग कब्जा गर्ने क्रम विस्तार गरिरहेको छ ।
अफगानिस्तान र इरानबीचको एक प्रमुख सीमा नाका तालिबानले कब्जा गरेको अफगान अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन् । इस्लाम काला नाका इरानसँगको सबभन्दा ठूलोमध्यको व्यापारिक नाका हो । त्यहाँबाट सरकारले मासिक २ करोड डलर राजस्व उठाउँथ्यो ।
अफगानिस्तानको रक्षा मन्त्रालयले नाका आफ्नो नियन्त्रणमा लिन प्रयासरत जारी रहेको बताएको छ। तालिबानले अफगानिस्तानको ८५ प्रतिशत भू–भाग आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेको छ । उसको दाबीलाई सरकारले भने अस्वीकार गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अगस्ट ३१ सम्ममा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गरिने बताएका छन् । यसअघि नै सन् २०२१ को सेप्टेम्बर ११ भित्रमा अमेरिकी सेना पूर्णरूपमा फर्किसक्ने समय सीमा तोकिएको थियो ।
मध्यावधी निर्वाचनमा जानु नै सही विकल्प– पूर्वमन्त्री बलायर
२८ दिनपछि डा. केसीको अनसन तोडियो
संसारकै अनौठो ठाउँ: जहाँ महिलालाई जुनसुकै पुरुषसँग शारीरक सम्बन्ध राख्न छुट
ककस्लाई सिफारिस गरियो राजदूत, कसले पाए कुन देशको जिम्मेवारी?
विकासप्रेमी सासंद पुनको मिहेनतले ललितपुरले मुहार फेर्दै (फोटो फिचर)
प्रयोग गरेर त हेर्नुस् यस्ता रहेछन् यौनशक्ति बढाउने ३ जडीबुटी
नेविसङ्घको म्याद दुई महीना थपियो